कैलालीमा १५ वर्षकी किशोरीले यसरी बनाइन् नाबालक भाइको ह,त्या योजना – Life Nepali
कैलालीमा १५ वर्षकी किशोरीले यसरी बनाइन् नाबालक भाइको ह,त्या योजना
धनगढी: कैलालीमा एक नाबालकको योजनाबद्ध ढंगले हत्या गरिएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी टीकापुर नगरपालिका–१ ब्लक नं. ८ का दिलिप बिष्टका साढे तीन वर्षका छोरा विवेकको योजनाबद्ध ढंगले हत्या भएको जनाएको हो। कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अघिकारीले हालसम्मको अनुसन्धानले हत्यामा मृतक नाबालकको दिदी नातापर्ने १५ वर्षकी किशोरी संलग्नता देखाएको जानकारी दिए। प्रहरीले उनीसंगै १४ वर्षकी किशोरीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ।
घटना अनुसार दिदी नातापर्ने १५ वर्षीया किशोरीले मृतक नाबालकलाई खेल्न जाने भन्दै असार २१ गते बिहान ११ बजे आफूसँगै लगेर गईन्। उनले नाबालकलाई खेलाउने बहानामा डो¥याउँदै जमरा कुला तर्फ लगिन्। उनीहरुको घर र जमरा कुलो झण्डै एक किलोमिटरको दूरीमा छ।
उनले विवेकलाई घरभन्दा केही पर रहेको जामुनको बोटबाट जामुन टिपेर खुवाईन्। त्यसपछि उनीहरु कुलातर्फ हिँडे। कुलाको किनार नपुग्दै बाटोको छेउमा बालबालिकालाई खेल्नका लागि फलामको पिङ बनाइएको छ। उनले विवेकलाई त्यहाँ पिङ खेलाइन्। उनीहरु पिङ खेलिसकेपछि फेरि कुलाको किनारतर्फ हिँडे।
पिङ भएको ठाउँबाट कुलाको किनारतर्फ जाने छोटो बाटो भएकोमा उनीहरुले लामो बाटो प्रयोग गरेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा किशोरीले लामो बाटो प्रयोग गर्नुको कारण छोटो बाटोमा विवेक जान नमानेको बताएकी छन्। उनले कुलोको किनारमा पुगेपछि विवेकलाई तेर्सो परेको सिसमको रुखमा राखिन्। त्यही क्रममा उनले विवेकको खुट्टाबाट चाँदीको बाला निकालिन्। विवेकलाई किनारमा उभिन लगाइन् र कुलोमा धकेलिन्।
विवेकलाई कुलोमा धकेलेपछि उनी घर फर्किइन्। उनले विवेकको खुट्टाबाट निकालेको चाँदीको बाला हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकी १४ वर्षीय किशोरी (साथी) लाई राख्न दिइन्। उनी त्यसपछि आफ्नो घर गएर लुगा फेरिन्। आफ्नो घरबाट निस्केकी उनी त्यसपछि अन्य चारजना साथीहरुको घरमा पुगेकी थिइन्। ती मध्ये दुईजनाले बजार पुगेर चाँदीको बाला बेच्ने प्रयास गरेको कुरा अनुसन्धानका क्रममा देखिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चाँदीको बाला बेचेर दुवैजनाले काठमाडौं जाने सल्लाह गरेका थिए।
उनले चाँदीको बाला निकाल्नु र त्यसलाई साथीसँग राख्न दिनुलाई घटना अन्यत्र मोड्न खोजेको प्रहरीसँग भनेकी छन्। प्रहरी किशोरीको कुराबाट विवेकको शव कुलोमै छ भन्ने कुरामा निश्चित भइसकेको थियो। प्रहरीले कुलोको पानी मुहानबाटै थुनेर सुकायो।
प्रहरीले असार २३ गते साढे ५ बजे घटनास्थलबाट करिव ५ किलोमिटर तल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ४ बाघमारास्थित कुलोमा नाबालकको शव भेटाएको थियो। किशोरीले पारिवारिक रिसिईबीका कारण विवेकको योजनाबद्ध ढंगले हत्या गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ। एसपी अधिकारीले थप दुईजना शंकाको घेरामा रहेको र घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।
Previous नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत निशालाई अपरिचित ब्यक्तिले अस्पताल भित्र पसेर जुस खुवाएपछि निशाको अवस्था बिग्रियो
Next सुदूपश्चिमका एक युवक मृ’त फेला